Mary Sharpe, seza - The Reward Foundation
Home Mary Sharpe, seza
Teraka tany Glasgow i Mary Sharpe ary nihalehibe tao amin'ny fianakaviana iray natokana ho amin'ny asa fanompoana ho an'ny daholobe amin'ny fampianarana, lalàna ary ny fitsaboana. Mbola kely izy dia nahatsapa ny herin'ny saina ary nianatra momba izany hatramin'izao.
Fanabeazana sy asa fanompoana
Mary dia nahavita ny mari-pahaizana Master of Arts tao amin'ny University of Glasgow tamin'ny teny frantsay sy alemà niaraka tamin'ny filozofia sy filozofia ara-pitondrantena. Nanaraka izany tamin'ny mari-pahaizana licence momba ny lalàna izy. Taorian'ny nahazoany diplaoma dia nanao mpisolovava sy mpisolovava izy nandritra ny 13 taona ho avy tany Ekosy ary nandritra ny 5 taona tao amin'ny Vaomiera Eoropeana any Bruxelles. Avy eo dia nanao asa vita diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Cambridge izy ary lasa mpampianatra tany nandritra ny 10 taona. Tamin'ny 2012 i Mary dia niverina tany amin'ny Faculty of Advocates, Scottish Bar, mba hamelombelona ny asa-tanany. Tamin'ny 2014 dia tsy nanao fanazaran-tena izy hanangana ny The Reward Foundation. Mijanona ho mpikambana ao amin'ny College of Justice sy Faculty of Advocates izy.
Nanana anjara andraikitra telo i Mary tao amin'ny The Reward Foundation. Tamin'ny Jona 2014 no filoha mpanorina. Tamin'ny volana Mey, 2016 dia nifindra tamin'ny andraikitry ny Lehiben'ny Mpanatanteraka izay notontosainy hatramin'ny Novambra 2019 izy rehefa nivadika tamin'ny birao ho filoha.
Nanatrika ny Oniversiten'i Cambridge i Mary tamin'ny taona 2000-1 mba hanao asa vita diplaoma momba ny fitiavana firaisana ara-nofo sy ny fifandraisan'ny herin'ny lahy sy ny vavy amin'ny vanim-potoana fahagola taloha hatramin'ny vanim-potoana voalohany. Ny rafi-sandan'ny fifanoherana izay hita tamin'io fotoana lehibe io dia mbola mitaona an'izao tontolo izao indrindra amin'ny alàlan'ny fivavahana sy ny kolontsaina.
Nijanona tao Cambridge nandritra ny folo taona i Mary.
Ho fanampin'ny asa fikarohana nataony, dia niofana ho mpanatontosa atrikasa ao amin'ny Oniversite i Mary miaraka amina fikambanana roa iraisam-pirenena, nahazo loka tamin'ny alàlan'ny fikarohana avy amin'ny psikolojia sy ny neurosains amin'ny fomba mihatra. Ny fifantohana dia ny fampivelarana ny fahaizan'ny adin-tsaina, ny fifandraisana amin'ny hafa ary ny fahatongavana ho mpitarika mahomby. Izy koa dia niasa ho mpanolo-tsaina ho an'ny mpianatra orinasa ary mpanoratra siansa ho an'ny Cambridge-MIT Institute. Fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo amin'ny Massachusetts Institute of Technology (MIT) sy ny University of Cambridge.
Ny fidirana ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge dia mijanona amin'ny alalan'ny roa St Edmund's College ary Lucy Cavendish College izay mpikambana mpiara-miasa aminy.
Mary dia nandany herintaona naha-mpitsidika mpitsidika tao amin'ny St Edmund's College, University of Cambridge tao amin'ny 2015-16. Io dia namela azy hitazona ny fikarohana tamin'ny siansa miseho amin'ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Nandritra io fotoana io dia niresaka tamin'ny fihaonambe nasionaly sy iraisam-pirenena am-polony izy. Mary dia namoaka lahatsoratra iray momba ny “Paikady hisorohana ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet” misy Eto (pejy 105-116). Niara-nanoratra toko iray ihany koa izy Miara-miasa amin'ireo mpandika lalàna amin'ny firaisana ara-nofo - torolàlana ho an'ny mpampiasa navoakan'ny Routledge.
Nanomboka tamin'ny volana janoary 2020 ka hatramin'ny fanidiana voalohany ny areti-mandringana, i Mary dia tao amin'ny Lucy Cavendish College ho mpitsidika mpitsidika. Nandritra izany fotoana izany dia namoaka a taratasy miaraka amin'i Dr Darryl Mead momba ny toerana tokony hanaovana fikarohana amin'ny ho avy momba ny fampiasana sary vetaveta manahirana.
Maria dia manohy ny asa amin'ny fiankinan-doha amin'ny fihetsika amin'ny maha-mpikambana azy Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Nanolotra taratasy izy tamin'ny fihaonambe Iraisam-pirenena faha-6 tany Yokohama, Japon tamin'ny Jona 2019. Mamoaka izy fikarohana ao amin'io faritra mipongatra io ao amin'ny peer reviewed reviews. Ny taratasy farany dia azo jerena Eto.
Technology Entertainment sy Design (TED)
Ny foto-kevitra TED dia mifototra amin'ny "hevitra mendrika zaraina". Sehatra fanabeazana sy fialamboly azo ampiasaina na lahateny mivantana na an-tserasera. Nanatrika ny TED Global tany Edinburgh i Mary tamin'ny 2011. Fotoana fohy taorian'izay dia nangatahina izy handamina ilay voalohany TEDx Hetsika Glasgow tamin'ny taona 2012. Iray tamin'ireo mpikabary nanatrika dia i Gary Wilson izay nizara ny zavatra hita farany avy tamin'ny olona malaza aminy tranonkala yourbrainonporn.com momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny ati-doha amin'ny lahateny iray antsoina "The Great Porn Experiment". Nanomboka tamin'io fotoana io dia nisy fotoana nijerena ny resaka 13.6 tapitrisa ary nadika tamin'ny fiteny 18.
Gary Wilson dia nanitatra ny lahateniny malaza ho bokim-pahaizana iray, izay nantsoina hoe fanontana faharoa Ny atidohanao amin'ny pôrnô: Pornografie amin'ny Internet ary ny firoboroboan'ny fiankinan-doha. Noho ny asany, olona an'arivony dia nanambara tao amin'ny tranonkala fanarenana sary vetaveta fa ny fampahalalana nataon'i Gary dia nanentana azy ireo hanandrana hiala amin'ny pôrnôgrafia. Notaterin'izy ireo fa nanomboka nihena na nanjavona ireo olana ara-pahasalamany sy ara-pihetseham-po nanomboka tamin'ny nialàny sary vetaveta. Mba hanampiana amin'ny fampielezana ny vaovao momba ireo fivoarana ara-pahasalamana mahaliana sy sarobidy ireo dia nanangana ny The Reward Foundation niaraka tamin'i Dr Darryl Mead tamin'ny 23 Jona 2014 i Mary.
Ny fampiasana sary vetaveta dia safidy iray manokana ho an'ny olon-dehibe. Izahay dia tsy mivoaka handrara izany fa mino izahay fa hetsika mety hampidi-doza io na dia ireo mihoatra ny 18 taona aza. Tianay ny manampy ny olona hisafidy safidy 'vaovao' momba izany mifototra amin'ny porofo avy amin'ny fikarohana misy ankehitriny. Mino izahay fa tsara kokoa ho an'ny fahasalamana sy ny fahasalamana ny mandany fotoana mampivelatra ny fahaiza-manao ara-tsosialy ilaina mba hahatonga ny fifandraisana akaiky hiasa maharitra.
Ny fampielezana ny valisoa Reward dia mampihena ny fahazoana mora amin'ny ankizy sary vetaveta amin'ny Internet satria am-polony maro fikarohana ny taratasy dia manondro fa manimba ny zaza amin'ny toe-javatra mora azony ny fivoaran'ny atidoha. Ankizy eo amin'ny karazana autistic ary miaraka amin'ny filàna manokana mianatra dia mora tohina. Nisy fiakarana goavana tao fametavetana mamoafady amin'ny ankizy tamin'ny taona lasa 7, amin'ny ratra ara-piraisana ara-nofo mifandraika amin'ny filan'ny nofo raha ny ara-pahasalamana izay nanatrika ny atrikasa ary angamba maty. Manohana ny hetsika nataon'ny governemanta UK izahay manodidina taona ho an'ny mpampiasa satria izy io dia fepetra voalohany sy lehibe indrindra amin'ny fiarovana ny zaza. Satria nesorina ny lalàna momba ny toekarena nomerika Fizarana III, manantena izahay fa hanafainganana ny asa amin'ny volavolan-dalàna momba ny haratsiana an-tserasera ny governemanta. Tsy bala volafotsy ity, fa toerana fanombohana tsara. Tsy hisolo ny filàna fanabeazana momba ny risika izany.
Loka sy fanoloran-tena
Nahazo mari-pankasitrahana marobe nanomboka tamin'ny 2014 hamolavola ny asan'ny Foundation ny seza. Nanomboka tamin'ny herintaona fiofanana tamin'ny alàlan'ny Skotisie Schloisse d'exploitation dikan'ny governemanta Scottish. Nalefa tany amin'ny The Potato Melting ao Edinburgh. Narahina loka roa avy amin'ny UnLtd, roa avy amin'ny Educational Trust ary iray hafa avy amin'ny Big Lottery Fund. I Mary no nampiasa ny vola tamin'ireto mari-pankasitrahana ireto ho an'ny mpisava lalana mpisava lalana any an-tsekoly. Namolavola drafitra lesona momba ny pôrnôgrafia ho an'ny mpampianatra any an-tsekoly ihany koa izy. Tao amin'ny 2017 dia nanampy tamin'ny famolavola atrikasa iray andro neken'ny Royal College of General Practitioners izy. Mampiofana ny matihanina amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
Mary dia tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-nofo any Etazonia nanomboka ny taona 2016-19 ary namokatra atrikasa fanofanana nahazo fankatoavana ho an'ireo mpitsabo ara-pananahana sy mpanabe momba ny firaisana momba ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet amin'ny Internet. Nandray anjara tamin'ny taratasy iray ho an'ny Fikambanana Nasionaly momba ny fitsaboana ireo mpanararaotra izy amin'ny “Fisorohana ny fitondran-tena manimba” ary koa nanolotra atrikasa 3 ho an'ireo mpitsabo momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fihetsika mamoafady manimba.
Avy amin'ny 2017-19 i Mary dia mpiara-miasa ao amin'ny Ivotoerana ho an'ny tanora sy ny fitsarana heloka bevava ao amin'ny University of Strathclyde. Ny fandraisany anjara voalohany dia niresaka tamin'ny hetsika CYCJ tamin'ny 7 martsa 2018 tao Glasgow. Zana-griara sy efitra figadrana: Fihaonana amin'ny filàn'ireo tanora voajanahary izay tsy azo amboarina.
Tamin'ny taona 2018 dia voatendry ho iray amin'ireo WISE100 vehivavy mpitarika eo amin'ny orinasa sosialy.
Rehefa tsy miasa dia mankafy jogging, yoga, dihy ary mizara hevitra vaovao amin'ny namana i Mary.
Mifandraisa amin'i Maria amin'ny alàlan'ny mailaka ao mary@rewardfoundation.org.